အနာဂတ် - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုရားကျောင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖန်ဆင်းခံ၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ရွေးနှုတ်တော်မူသောအရှင်၊ ခြွင်းချက်မရှိ ခြွင်းချက်မရှိ ချစ်တော်မူသောအရှင်၌ အသက်ရှင်လျက်၊ ချည်နှောင်လျက်၊ ခရစ်တော်၌ရှိနေကြောင်းကို နားလည်သောအခါ (တမန်တော် 12,32; ဗိုလ်မှူးကြီး 1,19စာ-၂၀; ယော 3,16(၁၇) ကျွန်ုပ်တို့သည် "ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိနေသည့်နေရာ" နှင့် ပတ်သက်၍ ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် စိုးရိမ်ခြင်းအားလုံးကို ဘေးဖယ်ထားနိုင်ပြီး ကိုယ်တော်၏မေတ္တာတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတွင် လမ်းညွှန်မှုပါဝါကို သေချာစွာ အမှန်တကယ် အနားယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဧဝံဂေလိတရားသည် သတင်းကောင်းဖြစ်သည်၊ အမှန်မှာ ၎င်းသည် အနည်းငယ်မျှသာမဟုတ်၊ ...
မMatthewဲ ၂၄ သည်“ အဆုံး” နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုသောအရာ
အဓိပ္ပာယ်ကောက်ကောက်လွဲမှားမှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်မallဲ ၂၄ ကိုယခင်အခန်းများ၏ပိုမိုကြီးမားသောအခြေအနေတွင်တွေ့ရန်အရေးကြီးသည်။ မMatthewဲ ၂၄ ၏သမိုင်းမတိုင်မီသည်အခန်း ၁၆၊ အခန်းငယ် ၂၁ တွင်အစပြုသည်ကိုသိရ။ သင်အံ့သြသွားပေမည်။ ထိုတွင်ထိုစဉ်ကအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည် -“ ထိုအချိန်မှစ၍ ယေရှုသည်ယေရုရှလင်သို့သွားပုံ၊ အကြီးအကဲများ၊
ပရောဖက်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်သူ သို့မဟုတ် သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်ရက်ကို တွက်ချက်နိုင်သည့်သူ အမြဲရှိလိမ့်မည်။ Nostradamus ၏ပရောဖက်ပြုချက်များကို Torah နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်ဟုပြောနိုင်သောရဗ္ဗိတစ်ဦး၏အကောင့်တစ်ခုကိုမကြာသေးမီကကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သည်။ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင် ယေရှု ပြန်လာမည်ဟု အခြားသူတစ်ဦးက ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ 2019 stattfinden werde. Viele Prophetie-Liebhaber versuchen, eine Verbindung zwischen den aktuellen Nachrichten und den biblischen…
ခရစ်တော်၏သဏ္ဌာန်တော်၌ မသေနိုင်သောအသက်ရှင်ခြင်းသို့ ရှင်ပြန်ထမြောက်ကြမည့် ယုံကြည်သူများသည် ခရစ်ယာန်အားလုံး၏မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကောရိန္သုမြို့ရှိ အသင်းတော်အချို့မှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ကြသည်ကို တမန်တော်ပေါလုကြားသောအခါ အံ့သြစရာမဟုတ်ပေ၊ 1. Brief an die Korinther, Kapitel 15, energisch zurückwies. Als Erstes wiederholte Paulus die Botschaft des Evangeliums, zu der auch sie sich bekannten: Christus war…
ဝမ်းနည်းတဲ့နေ့၊ ၁ ရက်နေ့ရောက်မှ၊4. 2001 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ရက်နေ့တွင် အမေရိကနှင့် အခြားနိုင်ငံများရှိ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများတွင် လူများစုရုံးကာ နှစ်သိမ့်မှု၊ အားပေးမှုနှင့် မျှော်လင့်ချက်တို့ကို ကြားနာရန် လာရောက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်၊ ဝမ်းနည်းကြေကွဲသောနိုင်ငံကို မျှော်လင့်ချက်ပေးဆောင်ရန် ၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် ရှေးရိုးစွဲခရစ်ယာန်ချာ့ခ်ျခေါင်းဆောင်အချို့သည် စိတ်ပျက်အားလျော့မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့် ကြောက်ရွံ့မှုတို့ကို လှုံ့ဆော်ပေးသည့် သတင်းစကားကို အမှတ်မထင် ဖြန့်ခဲ့ကြသည်။ တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ နီးစပ်သူတွေကို ပြောရရင်...
သခင်ယေရှု အမြန်ပြန်လာချင်သလား။ ဟေရှာယပရောဖက်ပြုထားသည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မြင်နေရသော ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် ဆိုးသွမ်းမှုအဆုံးသတ်ခြင်းကို မျှော်လင့်ပြီး ဟေရှာယပရောဖက်ပြုသည်– “ငါ၏သန့်ရှင်းသောတောင်တပြင်လုံး၌ ဒုစရိုက်နှင့်ဘေးဥပဒ်မရှိရ။ ပင်လယ်ကို ရေလွှမ်းမိုးသကဲ့သို့ မြေသည် ထာဝရဘုရားကို သိကျွမ်းခြင်းပညာနှင့် ပြည့်စုံသလော။ (ဟေရှာ 11,9). Die Autoren des Neuen Testaments lebten in Erwartung des zweiten Kommens Jesu, damit er sie aus der…
အဘယ်အရာကိုမျှအနာဂတ္တိကဲ့သို့ရောင်း။ အဲဒါအမှန်ပါပဲ။ ချာ့ချ်သို့မဟုတ် ၀ န်ကြီးဌာနတစ်ခုတွင်မိုက်မဲသောဘာသာရေး၊ ထူးဆန်းသောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး နှင့်ပြောင်လှောင်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့တွင်ကမ္ဘာ့မြေပုံများ၊ ကတ်ကြေးတစ်စုံနှင့်သတင်းစာပုံများရှိသည်။ သူ့ကိုယ်သူဖြစ်ရင်လူတွေကသူတို့ကိုပိုက်ဆံပုံးတွေပို့ပေးလိမ့်မယ်။ လူတွေကမသိတဲ့ကိုကြောက်ကြတယ်။
Proxima Centauri လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းအကြောင်းသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်ကနေကျွန်တော်ကိုသူကပြန်ပြောပြပါတယ်။ ၎င်းသည်အနီရောင်ပုံသေကြယ်ပွင့် Proxima Centauri ၏ပတ်လမ်းတွင်ရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကမ္ဘာမြေပြင်မှသက်ရှိများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မဖြစ်နိုင်ပါ (အကွာအဝေး ၄၀ ထရီလီယံကီလိုမီတာ) ။ သို့သော်လူတို့၏ဘ ၀ အပြင်ဘက်၌လူသားများကဲ့သို့သောဘဝမျိုးရှိ၊
အနှစ်တစ်ထောင်သည်ခရစ်ယာန်အာဇာနည်များယေရှုခရစ်နှင့်အတူအုပ်စိုးမည့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောကာလဖြစ်သည်။ အနှစ်တစ်ထောင်ပြီးနောက်ခရစ်တော်သည်ရန်သူအားလုံးကိုနှိမ့် ချ၍ အရာခပ်သိမ်းကိုနှိမ့်ချသောအခါသူသည်နိုင်ငံတော်ကိုခမည်းတော်ဘုရားသခင်လက်သို့အပ်နှံလိမ့်မည်။ အချို့သောခရစ်ယာန်အစဉ်အလာများသည်ထောင်စုနှစ်ကိုခရစ်တော်ကြွလာမည့်အနှစ်တစ်ထောင်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသည်။
၀ ံဂေလိတရားသည်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ the ၀ ံဂေလိတရားဟာကျွန်တော့်အတွက်သတင်းကောင်းမဟုတ်ခဲ့ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ဘ ၀ ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များမှာအသက်ရှင်နေရတယ်လို့သင်ကြားပေးခဲ့တယ်။ "ကမ္ဘာ၏အဆုံး" သည်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်အနေနှင့်ပြုမူပါကကြီးစွာသောဒုက္ခမှလွတ်မြောက်လိမ့်မည်။ ဒီလိုမျိုးကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းဟာစွဲလမ်းစေနိုင်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိအရာအားလုံးကိုကြည့်ရှုလေ့ရှိပါတယ် ...
“ငါသွား၍ သင်တို့နေရာအရပ်ကို ပြင်ဆင်ခြင်းဟူမူကား၊ ငါသည် သင်တို့ရှိရာအရပ်သို့ သင်တို့ရှိရာသို့ တဖန်လာ၍ ငါ့ထံသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းလည်း မှန်သည် (ယော၊ ၁။4,3) ဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ့် တစ်ခုခုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တောင့်တဖူးပါသလား။ ပထမရာစုရှိ ခရစ်ယာန်များအားလုံးသည် ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာခြင်းကို တောင့်တခဲ့ကြသော်လည်း ထိုခေတ်နှင့် ခေတ်ကာလများတွင် ရိုးရှင်းသော အာရမိတ်ဆုတောင်းချက်ဖြစ်သည့် “မာရနသာ” ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မှာ ...
နာခံမှုမရှိသောကလေးကိုအပြစ်ပေးရန်သင်၌အကြောင်းပြချက်ရှိပါသလား။ ဒီအပြစ်ဒဏ်ဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းပြောဖူးသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၌ကလေးရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်မေးခွန်းအနည်းငယ်ရှိသည်။ ပထမဆုံးမေးခွန်းကတော့သင့်ကလေးသည်သင်၏စကားကိုနားမထောင်ဘူးလား။ ကောင်းပြီ၊ မသေချာရင်အချိန်ယူစဉ်းစားပါ။ အိုကေ၊ အခြားမိဘများနည်းတူသင်ဟုတ်ကဲ့ဟုဖြေပါကယခုဒုတိယမေးခွန်းသို့ရောက်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နိုင်တဲ့အကြီးမားဆုံးဖြစ်ရပ်ကဘာဖြစ်မယ်လို့ခင်ဗျားထင်သလဲ။ နောက်ထပ်ကမ္ဘာစစ်လား ကြောက်မက်ဘွယ်သောရောဂါအတွက်ကုထုံးတစ်ခုရှာဖွေတွေ့ရှိမှု? တစ်ချိန်တည်းမှာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးလား ဂြိုဟ်သိမ်ပညာနှင့်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ သန်းနှင့်ချီသောခရစ်ယာန်များအတွက်ဤမေးခွန်း၏အဖြေသည်ရိုးရိုးလေးဖြစ်သည်။ အကြီးကျယ်ဆုံးအဖြစ်အပျက်သည်ယေရှုခရစ်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာ၏အဓိကသတင်းစကား ...
«တရားရုံးရောက်နေပြီ! တရားစီရင်တော်မူပြီ။ အခုနောင်တရရင်မင်းငရဲသွားလိမ့်မယ်။ အော်ဟစ်သောevဝံဂေလိဆရာများထံမှထိုစကားလုံးများသို့မဟုတ်အလားတူစကားလုံးများကိုသင်ကြားဖူးပေမည်။ သူမ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ - နားထောင်သူများအားကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကိုကတိက ၀ တ်ပြုရန် ဦး ဆောင်ရန်။ ထိုသို့သောစကားသည်theဝံဂေလိတရားကိုလိမ်စေသည်။ ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်ခရစ်ယာန်များစွာသည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာယုံကြည်ခဲ့ကြသည့်ထာဝရထာဝရတရားစီရင်ခြင်း၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်မဝေးနိုင်သေးပါ
သမ္မာကျမ်းစာတွင် “ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏” ဟု ရေးထားသည်။1. ဂျို 4,8). Er hat beschlossen, Gutes zu tun, indem er den Menschen dient und sie liebt. Aber ebenso weist die Bibel auf Gottes Zorn hin. Doch wie kann derjenige, der reine Liebe ist, auch etwas mit Zorn zu tun haben? Liebe und Zorn schliessen einander nicht aus. Deshalb dürfen wir erwarten, dass Liebe, der Wunsch, Gutes zu tun auch Zorn oder Widerstand gegen alles Verletzende und Zerstörende einschliesst. Gottes…
ကတိပြုထားသည့်အတိုင်း၊ ယေရှုခရစ်သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင် လူအားလုံးကို တရားစီရင်ရန်နှင့် အုပ်ချုပ်ရန် မြေကြီးပေါ်သို့ ပြန်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် ဘုန်းတန်ခိုးတော်ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်သည် သန့်ရှင်းသူတို့၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ဆုလာဘ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ (ယော ၁4,3; epiphany 1,7; မဿဲ ၂4,30; 1. သက်သာလောနိတ်မြို့ 4,15စာ-၁၇; ဗျာဒိတ် ၂2,12) Wird Christus zurückkehren? Was denkt Ihr, wäre das grösste Ereignis, dass auf der Weltbühne passieren könnte?…
မိုးတိမ်ပေါ်တွင်ထိုင်ခြင်း၊ ညဝတ်ဂါဝန်ကိုဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်စောင်းတီးခြင်းတို့ကကောင်းကင်၏သရုပ်ဖော်ပုံများသည်သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက်နှင့်မည်သို့မျှမသက်ဆိုင်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်သမ္မာကျမ်းစာကကောင်းကင်ကိုကြီးကျယ်သောပွဲတော်တစ်ခုအဖြစ်ပုံဖော်ထားသည်။ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှာအရသာရှိတဲ့အစားအစာနဲ့ဝိုင်ကောင်းကောင်းရှိတယ်။ ၎င်းသည်အချိန်တိုင်းတွင်အကြီးဆုံးမင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲဖြစ်ပြီးခရစ်တော်နှင့်အတူသူ၏မင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပသည်။
မင်းရဲ့တံခါးကိုလာခေါက်ပြီးတစ်ယောက်ယောက်သေဆုံးသွားတာကိုမင်းတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူးတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ဦး လေးတစ်ယောက်ကသင့်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဖြစ်မှထွက်ခွာသွားစေချင်တယ်လို့ပြောဖူးလား။ ငွေဘယ်နေရာမှာမှပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်၊ လူများစွာရဲ့အိပ်မက်တွေ၊ စာအုပ်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်များစွာရဲ့ရဝုဏ်တစ်ခု။ အသစ်တွေ့ရှိသောစည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်သင်ဘာလုပ်မည်နည်း။ မင်းရဲ့ဘဝကိုသူဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မလဲ သူ ... လား
လာဇရုနှင့်သူဌေး - မယုံသောပုံပြင်
မယုံကြည်သူအဖြစ်သေလွန်သူများကိုဘုရားသခင်လက်လှမ်းမမီနိုင်ကြောင်းသင်ကြားဖူးပါသလား။ ၎င်းသည်သူဌေးနှင့်ဆင်းရဲသောလာဇရု၏ပုံဥပမာထဲမှတစ်ခုတည်းသောကျမ်းချက်တစ်ချက်အားဖြင့်သက်သေပြနိုင်သည့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်။ ဖျက်ဆီးတတ်သောအယူဝါဒဖြစ်သည်။ သို့သော်သမ္မာကျမ်းစာပါကျမ်းပိုဒ်အားလုံးကဲ့သို့ပင်၊ ဤဥပမာသည်အချို့သောအခြေအနေများတွင်သာ ဖြစ်၍ ဤအခြေအနေတွင်သာမှန်ကန်စွာနားလည်နိုင်သည်။ အခန်းငယ်တစ်ခုတည်း၌အယူဝါဒထားခြင်းသည်အမြဲမကောင်းပါ။
တမန်တော်များ၏ တမန်တော်များ တွင်၊ 1,9 “အဲဒါကို သူပြောပြီးတဲ့အခါ တိမ်တွေက သူ့ကို မျက်လုံးတွေကနေ ခွာယူသွားတော့တယ်။” ဒီအချက်မှာ ရိုးရိုးမေးခွန်းတစ်ခု မေးချင်ပါတယ်- ဘာကြောင့်လဲ။ ယေရှုကို ဘာကြောင့် ဒီနည်းနဲ့ ခေါ်သွားတာလဲ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ မရောက်မီ နောက်သုံးပိုဒ်ကို ဖတ်ရသည်– “ထိုသူသည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်သွားသည်ကို ကြည့်ရှုသောအခါ၊ ဝတ်ရုံဖြူဝတ်ထားသော လူနှစ်ယောက်သည် သူတို့အနားတွင် ရပ်နေ၏။ သူတို့က “မင်းတို့ ယောက်ျားတွေ…
ခေတ်ကာလ၏အဆုံးတွင်၊ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်၏ ကောင်းကင်ပလ္လင်တော်ရှေ့တွင် အသက်ရှင်လျက် သေဆုံးနေသူအားလုံးကို တရားစီရင်ရန် စုဝေးလိမ့်မည်။ ဖြောင့်​မတ်​သော​သူ​သည် ထာ​ဝ​ရ​ဘုန်း​အ​သ​ရေ​ကို​ခံ​ရ​လိမ့်​မည်၊ လူ​ဆိုး​တို့​သည် မီး​အိုင်​၌​အ​ပြစ်​ဒဏ်​ခံ​ရ​လိမ့်​မည်။ ခရစ်တော်၌၊ သခင်ဘုရားသည် သူတို့သေဆုံးသောအခါ ဧဝံဂေလိတရားကို မယုံကြည်သူ အပါအဝင် အားလုံးအတွက် သနားဖွယ်ကောင်းပြီး တရားမျှတသော စီမံပေးမှုကို ပြုလုပ်ပေးသည်။ (မဿဲ ၂5,31စာ-၁၇; တမန်တော် ၁4,15; ယော 5,28စာ-၂၉; ဗျာဒိတ် ၂၀:၁၁-၁၅; 1. တိမောသေ 2,3နှစ်ဆယ် 2. ဓာတ်ဆီ 3,9;…
the ၀ ံဂေလိတရားဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။ ဒါကိုသတင်းကောင်းလို့ခင်ဗျားတကယ်စဉ်းစားသလား။ သငျသညျဤမျှလောက်များစွာသောကဲ့သို့ငါအသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဘို့ငါဆုံးမinဝါဒပေးလျက်ရှိသည်သောငါတို့နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလ၌အသကျရှငျ။ ဒါကအရာရာကိုရှုထောင့်ကနေကြည့်တဲ့ကမ္ဘာအမြင်ကိုပေးခဲ့ပြီးဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့နိဂုံးချုပ်သက်တမ်းကိုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲရောက်လိမ့်မယ်။ ငါမူကားထိုသို့ပြုလျှင်၊
ခရစ်ယာန်အချို့မှထောက်ခံအားပေးသော“ ချီဆောင်ခြင်းအယူဝါဒ” သည်သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာသောအခါချာ့ချ်မည်သို့ဖြစ်သွားသည်ကိုအများအားဖြင့်ခေါ်လေ့ရှိသောဒုတိယမြောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အယူဝါဒကယုံကြည်သူများသည်တက်ကြွခြင်းတစ်မျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ရသည်။ သူသည်ဘုန်းတော်ဖြင့်ပြန်လာချိန်၌တစ်ချိန်ကခရစ်တော်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ဆွဲဆောင်ခံရလိမ့်မည်။ Rapture ယုံကြည်သူများသည်အခြေခံအားဖြင့်သက်သေပြရန်ကျမ်းပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကိုအသုံးပြုသည်။